शिक्षण पेशा छाडेर कृषि कर्ममा रमाउँदै जोशी - Halesi Khabar
४ मंसिर २०७६, बुधबार १६:५५ ।
खोटाङ, ४ मङ्सिर । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ का सुवाश जोशीको कृषि फार्ममा सात जना स्थानीय युवा कार्यरत छन् । दिक्तेलस्थित अल्छेढुङ्गामा सञ्चालन गरिएको कृषि फार्ममा काम गर्ने स्थानीय युवाको मासिक तलब रु दश हजारदेखि रु १५ हजारसम्म छ ।
कृषि फार्ममा काम गर्ने युवालाई खान, बस्न र लगाउन निःशुल्क छ । जोशीको फार्ममा ब्रोइलर कुखुरा, लेयर्स कुखुरा, राँगा, गाई तथा सुँगुर पालिएको छ ।
१९ वर्षसम्म शिक्षण पेशा गर्नुभएका जोशीले आफ्नो पूरानो पेशा छाडेर कृषि व्यवसाय शुरु गर्नुभएको हो । जोशीले पञ्च मावि दिक्तेलमा वि.सं. २०५० देखि वि.सं. २०५६ सालसम्म र वि.सं. २०५६ फागुनदेखि वि.सं. २०६९ साल साउनसम्म माउण्ट एभरेष्ट बोर्डिङ स्कूलमा शिक्षण गर्नुभएको थियो ।
ब्रोइलर कुखुरा पालनका लागि आफ्नो नाममा त्रिशक्ति पोल्ट्री फामै दर्ता गरेर व्यवसाय शुरु गर्नुभएका जोशीले स्थानीयवासिन्दाको समन्वयमा दोर्पा र पाथेकामा उपशाखा समेत सञ्चालन गर्नुभएको छ । करीब आठ वर्षदेखि व्यवसायिक कृषि पेशामा लाग्नुभएका जोशीले मासुका लागि ब्रोईलर कुखुरा, सुँगुर र राँगा तथा दूधका लागि गाई र अण्डाका लागि लेयर्स फार्म खोल्नुभएको छ ।
जिल्लामा पहिलो पटक कुखुरा फार्म शुरु गर्नुभएका जोशीले पछिल्लो समय अन्य कृषकलाई समेत एकीकृत बनाएर कालिका कृषि सहकारी खोल्नुभएको छ । जोशी सो संस्थाका संस्थापक तथा अहिले पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
व्यवसायी जोशीले आसपासका नौँ वटा ब्रोइलर फार्मलाई दाना, चल्ला, औषधि दिनुका साथै निःशुल्क प्राविधिक सेवासमेत उपलब्ध गराउँदै आउनुभएको छ । जोशीको र्फाममा उत्पादित राँगा, कुखुरा र दूध जिल्लामै उपयोग हुन्छ भने, सुँगुर राजधानी काठमाडौँ पठाउने गरिएको जनाइएको छ ।
आफ्नै २२ रोपनी जग्गामा कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आउनुभएका जोशीको सबै खर्च कटाएर मासिक आम्दानी रु ८० देखि ९० हजारसम्म हुने गरेको पाइएको छ । जिल्लामा अहिले ब्रोइलर कुखुराको मासु प्रति केजी रु ४००, सुँगुर रु ३०० र राँगा प्रति केजी रु ३५० मा पाइन्छ । अण्डा प्रति कार्टुन (२१० दाना)लाई रु दुई हजार ३०० र दूध प्रति लीटर ७० मा बिक्री हुने गरेको पाइएको छ ।
एक छोरी र एक छोराका बुबा जोशीले अहिलेसम्म सरकारी निकायले केहिमा पनि साथ नदिएको आरोप लगाउनुभयो । “जिल्लामा केहि गरौँ भनेर कृषि व्यवसाय शुरु गरियो”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी निकायबाट बाहिरी आयातलाई रोक लगाउँदै सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएमा थप केहि गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ ।”
अण्डा र कुखुराको मासुमा जिल्ला आत्मनिर्भर रहेको घोषणा गरिएपनि बाहिरी आयातमा रोक नलगाउँदा घाटाको व्यापार गर्नुपरेको जोशीले बताउनुभयो । जोशीको फार्ममा पालिएका सुँगुर, राँगा र गाईलाई सोहि फार्ममा उत्पादन गरिएको घाँस तथा दाना दिने गरिएको कामदारहरुले बताएका छन् ।